Arctic Cordillera: njirimara, geology na mkpa | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka ugwu ugwu arctic. Ọ bụ usoro ugwu nke ọgbaghara gbajiri agbaji. A na-akpọkwa ya Arctic Rockies. Ọ dị na ụsọ ugwu ọwụwa anyanwụ nke Ugwu America. Ọ nwere ọtụtụ ọnụ mmiri igwe na nnukwu ugwu glaciers nke ghọrọ ebe pụrụ iche. Ha bụ ugwu di iche-iche na-ejedebe na mpaghara ọwụwa anyanwụ ya na mmiri nke Baffin Bay na mpaghara ugwu ya na mpaghara Arctic Ocean, ya mere aha ha.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara, njiri mara ala, ahịhịa na osisi nke oke ugwu Arctic.
2 Ọnọdụ gburugburu ugwu ugwu Arctic
3 Ebe nchekwa sitere na oke ugwu Arctic
Ọ bụ ugwu dị iche iche nke sitere na mgbago ugwu nke Labrador Peninsula ma biri n'ụsọ mmiri niile na ọtụtụ agwaetiti na agwaetiti Arctic nke Canada. Ha na-ekpuchi ngụkọta nke ihe karịrị kilomita 2.700. Ọ nwere ọtụtụ ọnụ mmiri nwere oke mmiri na nnukwu glaciers na-etolite nnukwu mpaghara ice. Nlekọta, ọ dịkwa nke mpaghara kwụ ọtọ nke Nunavut, ọ bụ ezie na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ bụ nke ógbè Newfoundland na Labrador na Quebec.
Ọ bụ sistemụ nke kewara ụzọ usoro ugwu na nwere ụfọdụ ugwu nwere elu nke ihe karịrị mita 2.000. A maara elu kachasị elu dị ka Barbeau Peak ma dị elu 2.616 mita. A makwaara ya dị ka ebe kachasị elu na ọwụwa anyanwụ North America. Usoro ugwu a dum, tinyere Ugwu Rocky, nke ndị isi abụọ na Canada. Ọ bụ otu n'ime ecozones nke dị n'akụkụ ugwu Arctic Ocean, ebe akụkụ nke ụlọ ọrụ Labrador nwere ihu igwe a maara dị ka taiga. Ọta taiga adịghị ka ọ na-emetụta Ecozone, ebe ahuru otutu ihe di ndu, ọ dịghịkwa emetụta mpaghara ókèala. Nke a bụ n'ihi na ihe ha na-ahụ maka ndu bụ nke ọzọ.
N'okwu a anyị na-ahụ ihu igwe oyi na ihu igwe na-ekpo ọkụ yana ụfọdụ ụdị osisi dị iche iche yana anụmanụ ndị na-emegharị gburugburu ebe dị iche iche. Oguzo maka inwe odida obodo nke nnukwu ice pola nwere ugwu ice na ala fjords na-achịkwa. Ebumnuche nke usoro okike niile a na-etolite na mbara ala pụrụ iche mara mma. Ọ nwere oke oke oke mmiri nwere ọnọdụ gburugburu ebe obibi n'ọtụtụ mpaghara arctic ndị yiri ya na ụwa. A maara ebe ha nwere ọnọdụ na-enweghị mgbaghara, ọ bụ ezie na ụmụ mmadụ ejirila ihe dị ka otu puku mmadụ bi na ya.
Ọnọdụ gburugburu ugwu ugwu Arctic
Uzo odida ala nile bu ice ma obu nkpuru osisi ekpuchitere di 75%. N’ebe a, anyị hụrụ ala a ma ama na-adịgide adịgide nke akpọrọ permafrost. A permafrost na-anọgide na-afọ na-eme ka osisi na anụmanụ ndụ dịtụ ụkọ. Buru n'uche na ka ndụ dị, a ga-enwerịrị agbụ nri. N'ihi usoro a bụ otu esi enweta njikọ dị iche iche nke anụmanụ na osisi ga-esi nwee ọganihu.
Ugwu Arctic na-ajụkarị okpomọkụ o site na ogo 6 n'oge ọkọchị ruo -16 ogo n'oge oyi. Ọnọdụ okpomọkụ ndị a dị ala na-eme ka ahịhịa ghara ịdị. Tumadi ihe mere na e nweghị osisi bụ n'ihi na-adịgide adịgide akpụrụ na snow. Ugwu Arctic bụ ecozone dị warara ma e jiri ya tụnyere mpaghara ndị ọzọ nke Canada.
Nke a bụ ugwu ugwu nke ụwa. A maara ha dị ka Ugwu Challenger ma dị na mpaghara ugwu ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ. N'iburu mkpa ha nwere maka usoro okike na gburugburu ebe obibi nke okike, e guzobere perimeta na ngalaba nke mpaghara okike echedoro. A maara ya dị ka Torngat Mountains National Park Reserve, nke dị na Labrador Peninsula ma na-ekpuchi ọtụtụ akụkụ ndịda nke Arctic Range. Mpaghara a na-echekwa echedoro maka ichedo ọtụtụ ụdị anụ ọhịa dị iche iche dị ka polar bea, falgons peregrine, ugo ọla edo na caribou.
Ebe nchekwa sitere na oke ugwu Arctic
E guzobere ogige okike na Jenụwarị 22, 2005, na-eme ka ọ bụrụ ogige ntụrụndụ mba mbụ na Labrador. O nwere otutu otutu glaciers na okpu polar nke mpaghara ha kachasi mmiri mmiri bu ugwu na akuku ice. Glaciers na-adịkarị na oke ndịda ebe ha na-adị mmiri mmiri. Ọ bụrụ na anyị gaa Ellesmere Island, anyị ga-ahụ na ọtụtụ n'ime nhọrọ ndị ahụ bụ glaciers na ice. N'ime narị afọ nke 500, oke osimiri ice jupụtara na 90 kilomita n'ogologo kpuchie ụsọ mmiri ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ dum. Dị ka a tụrụ anya ya, ugwu ndị a na-emetụta mmetụta nke okpomoku zuru ụwa ọnụ. Akụkụ ice a dum belatara XNUMX% n'ihi mmetụta nke mmụba nke okpomọkụ kpatara site na nsị nke ikuku gas.
Enwere ihe omumu emere na 1986 banyere ihe okpomoku zuru uwa banyere ugwu Arctic ma achoputara na 48 km2, nke gunyere 3.3 km 3 (0.79 cubic kilomita) nke ice, gbapuru na Milne na Ayles ice shelf. 1959 na 1974. A maara akụkụ nke fọdụrụnụ kachasị ukwuu nke oke osimiri ice dị ka Ward Hunt Ice shelf. Nbibi nke ebe nchekwa Ellesmere gara n'ihu na narị afọ nke XNUMX: Ward Ice Shelf nwetara nnukwu mgbawa n'oge okpomọkụ nke 2002.
Igbe nke okpomoku zuru ụwa ọnụ, mgbawa kasịnụ nke enwetarala bụ nke ikpo okwu nke nwere ike ibute ụlọ ọrụ mmanụ na Oke Osimiri Beaufort iyi egwu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, otu n'ime ugwu ugwu kachasị mma n'ụwa na-emetụta mmetụta nke okpomoku zuru ụwa ọnụ. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke ugwu Arctic na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu ugwu Arctic